Hooyadii khasabka cunugga ugu dhashay taliyaha Daacish ee go’aanka qalbi-jabka ah qaadatay | Xaysimo
Home War Hooyadii khasabka cunugga ugu dhashay taliyaha Daacish ee go’aanka qalbi-jabka ah qaadatay
Hooyadii khasabka cunugga ugu dhashay taliyaha Daacish ee go’aanka qalbi-jabka ah qaadatay
“Aadan wuxuu lahaa timo casuus ah iyo indho cagaaran, mana uusan u ekeyn walaalihiisa kale ee gabdhaha iyo wiilashada ah. Aniga waan jeclaa ilaa markii aan maqlay oohintiisii ugu horreysay. Wuxuu ahaa iftiin ii baxay xilli aan mugdi ku jiray”, sidaas waxaa tiri Jovan.
“Aaad baan u faraxsanaa, waxaana ku noolaa nolosha ugu fiican ee qof u suurtagali karta”, ayey tiri Javan.
Hase ahaatee, qaarkood way garanayeen wajiyadooda – sababtoo ah waxay ahaayeen rag ka soo jeeday xaafadaha dariska la ah. Raggii dadka xaafadda waxay u ballan qaadeen inaysan wax dhibaato ah gaarsiin doonin haddii ay amarkooda.
Qoyskii Jovan waa la burburiyay, waxayna ka mid noqdeen 20 qoys oo halkaas laga kaxeystay. Ugu dambeyn waxaa la geeyay dooxada Sinjar ee ku taalla waqooyiga dalka Ciraaq.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in bishii August ee sanadkii 2014-kii ay waqooyiga Ciraaq ka dhacday xaalad ay dad aan waxba galabsanin ku baaba’een, kuwo arxan daranna ku abuurmeen.
“Waan gaarsiinnay farriintaas laakiin cidna nagama aqbalin”, ayuu yiri Khedr. Mid ka mid ah dadka buuraha u cararay wuxuu ahaa walaalkiis, wuuna diiday inuu gacanta u soo galo xoogaggii IS. Kooxda IS waxaa lagu yaqaannay inay leyso ragga aysan adeegsaneynin. Khedr iyo xaaskiisu waxay ka mid ahaayeen dadka diin ahaan loo bartilmaameedsanayay, maadaama aysan muslimiin ahayn, kana soo jeedeen qowmiyadda Yaziidi.
“Wax awood ah uma aannaan lahayn inaan isdifaacno”, ayey tiri Jovan. Markaas ka dib seygeeda Khedr ma aysan arkin muddo 4 sano ah.
Iyada iyo carruurteeda waxaa la geeyay guri saddex dabaq ka kooban, oo sidoo kale ay ka buuxeen carruur iyo haween kale – oo gaarayay qiyaastii 1,500.
Jovan waxay sheegtay inay taqaannay qaar badan oo ka mid ahaa haweenkii halkaas lagu hayay – oo qaarkood ay qaraabo ahaayeen kuwo kalena daris ahaayeen.
“Waxaan isku dayeynay inaan niyadda isku dhisno, annagoo isku sheegeyna inay mar uun dhici doonto mucjiso, oo nala sii deyn doono”, ayey tiri.
Jovan waxaa laga filayay inay diinta Islaamka qaadato islamarkaana uu ninkaas “guursado”.
“Runtii waxaan ku fikiray inay ii fiicneyd inaan isdilo, laakiin waxaan ka fikirayay carruurteyda. Maxaa ku dhici lahaa haddii aan aniga ka tago?”.
Qaar badan oo ka mid ahaa carruurtii Yaziidiyiinta waa laga kaxeeyay hooyooyinkood – wiilasha waxaa loo qaaday xeryaha tababarka ciidamada, gabadhahana waxaa laga iibiyay rag u galmoonayay kuwo kalena waxaa loo qaatay shaqaalaha guryaha.
Jovan, carruurteeda iyo ninkii u dhashay Tunisia waxay u guureen guri ay dadkii lahaa ka qaxeen oo ku yaallay magaalada Raqqa. Xilligaas, IS waxay gacanta ku hayeen deegaanno badan oo ka tirsanaa Ciraaq iyo Suuriya, oo baaxaddoodu ay la ekeyd dhulka ay ku fadhiso UK, sida laga soo xigtay hay’adda la dagaallanka argagixisada ee Qaramada Midoobay.
Laakiin markii uu ogaaday inay uur u leedahay wuu baddalay go’aankiisa.
7 bilood oo uur ah markii ay lahayd, Jovan waxaa loo soo sheegay in Abu Muhajir lagu dilay dagaal. Xilligaas wixii ka dambeeyayna, cunugga mas’uuliyaddiisa waxay saarnayd iyada kaligeed.
“Aabihiis wuxuu ahaa dilaa, laakiin isagu wuxuu kasoo go’ay jirkeyga”
“Wuxuu ii ahaa qof aanan ka maarmi karin. Waan ogaa inuusan seygeyga runta ah dhalin, oo aabihiisna uu ahaa dilaa, laakiin wuxuu ahaa dhiiggeysa, jirkeyga ayuuna kasoo go’ay”, ayey tiri.
Khedr, wuxuu ugu dambeyn go’aansaday inuu carruurtiisa hooyadood dib ugu soo celiyo, wuxuuna Jovan u sheegay in Adam uu soo dhaweynayo.
“Waxay ii sheegayeen sida ay muhiim u tahay inaan diinteenna ilaalinno, iyo sida aysan bulshadeennu marna u aqbali doonin cunug uu dhalay nin muslim ah oo waliba ka tirsanaa dagaalyahannada IS”.
“Illin badan ayaa wajigeeda qoysay markii ay cunugga wareejineysay. Ma jiro wax ka xun marka aad cunug Yaziidi ah ka qaadeysid hooyadiis, waxay la mid tahay sidii adigoo qeyb ka goyneysid wadnaheeda”, ayey tiri.
Laakiin inkastoo ay dib ula midowday carruurteedii ay jecleyd, Jovan wali waxay dareemeysay inay wax weyn ka maqan yihiin. Maalmo markii ay kasoo wareegeen xilligii ay xaerunta agoomaha kasoo tagtay, waxay go’aansatay inay carruurteeda kale ee saddexda ah iska heysato. Balse waxay dareemeysay inaysan suurtagal ahayn.
“Isaga ayaan mar walba ka fikiri jiray”, ayey tiri.
“Habeen kasta waan ku riyoon jiray. Sideen ku illoobaa? Naas ayaan nuujiyay, waa cunigeyga. Adiga ayaan ku weydiinayaa: Haweenka anigoo kale ah ma khaldan yihiin? Miyaan ku khaldan nahay inaan u xiisno carruurteenna?”, ayey tiri Jovan.
Dowr isbuuc ka dib, Jovan ma aysan sii moogaan karin wiilkeeda yar. Waxay qaadatay go’aan ay dareensaneyd inuu horseedi karo inaysan dib ugu soo laabanin qoyskeeda.
“Aad bay u xanuun badneyd inaan iyaga ka tago, laakiin waxaan sidoo kale dareemayay inaan khiyaanay cunugeyga yar. Carruurteyda kale way koreen, [Haitham wuxuu markaas kusii dhawaa 20 jir], aabahood ayeyna heysteen. Laakiin Aadan cidna ma uusan heysanin, anigana habeen iyo maalin ayaan u xiisayay”, ayey tiri.
Markii ay Jovan tagtay xaruntii agoonta, waxaa loo sheegay Aadan inuu xanuunsanaa, oo aysan arki karin. Laakiin Sakineh waxau ugu dambeyn qirtay – labo ama saddex maalmood ka dib – in xaruntii agoomda uu khilaaf ka dhacay islamarkaana uu garsoore xukumay in qaar ka mid ah caruurta loo bandhigo dad korsada.
“Mararka qaar waxaan ku fikiraa in noloshan ay ka fiicneyd tii aan ku jirnay markii ay IS gacanta nagu hayeen, sababtoo ah markaas ugu yaraan waxaan heystay carruurteyda oo dhan”, ayey tiri.
“Waxa ugu weyn ee aan ka cabsanayo waa in carruurteyda ay i hilmaamaan, ama ay i cafin waayaan, waayo waan ka tagay, laakiin mar walba waxaan isku qanciyaa inaysan hooyadood illoobi doonin”.
“Waxaan ku rajo weynahay in maalin uun Ilaahay uu ii naxariisan doono, ka dibna aan is arki doonno ilamaheyga”, ayey tiri.